Mpanonta fandrindrana (* Tonian-dahatsoratra) | Avy amin'ny Linux
Mpanonta fandrindrana (* Tonian-dahatsoratra)
Alf | | Fisehoana / personalization, fampiharana
Hatramin'ny nivoahany Gnome 3, Unity y Akorandriaka gnome, Nanomboka nitady tontolo hafa aho satria tsy tiako ny nivoaka, fa tsy manakana ahy tsy hanadihady izany.
Ao amin'ny kinova taloha an'ny Ubuntu amin'ny GNOME2 maro amin'ireo fananganana azy no azo ovaina gconf-tonian-dahatsoratra, ilaina rehefa tsy manome fomba hanovana safidy iray ny fampiasana fikirakira mety ho an'ny rindrambaiko sasany; ankehitriny miaraka amin'ny GNOME3, miaraka amin'ireo interface samihafa (Mate, Kanelina, Gnome-Shell, Firaisankina) maromaro no ampiasaina "Conf-editors" o "Mpanonta fandrindrana".
Ny tsirairay amin'ireo "Mpanonta fandrindrana" Tsy maintsy novonoina izy ireo avy amin'ny interface izay nanamboarana azy ireo, raha ampiasaintsika amin'ny interface hafa izy ireo dia tsy ho hitantsika ny vokany raha tsy manomboka ny interface mety amin'ny "Mpanonta fandrindrana" izay novainay.
GConf-tonian-dahatsoratra: Ho an'ny interface kanelina y Akorandriaka. Tokony apetrakao ilay fonosana gconf-tonian-dahatsoratra, ary tantano ny baiko gconf-tonian-dahatsoratra . Amin'ity tranga ity, na dia ampiasaina aza ny programa tonian-dahatsoratra, dia ahitsy ny firaketana samihafa kanelina and for Akorandriaka.
Ohatra, ny manova ny bokotra amin'ny fikandrana fikandrana Ampitomboy / ahenao / hikatona, novaina tamin'ny gconf-tonian-dahatsoratra: ny fidirana: birao »gnome» akorany »windows: button_layout ho an'ny interface Akorandriaka ny fidirana: birao »kanelina» windows: button_layout ho an'ny interface kanelina
Tsy toy ny nitranga tamin'ny gconf-editor in GNOME2 (nisy vokany teo no ho eo ny fanovana) , ankehitriny dia tsy maintsy mivoaka ny fivoriana isika ary miditra indray.
Ho an'ny fanovana gconf-tonian-dahatsoratra afaka mampiasa ny fitaovana fikarohana izahay (Ovay »Search) izay manampy amin'ny fitadiavana sanda na anarana lakile manokana.
Mate-conf-tonian-dahatsoratra: Araka ny anarany dia ampiasaina amin'ny fikirakirana MATE izy io. Ny fiovana ataontsika dia manan-kery eo noho eo, raha ampiharintsika avy eo amin'ny interface tsara: VADIKO.
Ohatra, ao amin'ny interface Mate mba hanovana ny bokotra amin'ny fikandrana programa Ampitomboy / ahenao / hikatona,, novaina tamin'ny Mate-conf-tonian-dahatsoratra ny fidirana: fampiharana »rafitra» ankapobeny: button_layout
Ho an'ny fanovana Mate-Conf-tonian-dahatsoratra afaka mampiasa ny fitaovana fikarohana izahay (Ovay »Search) izay manampy amin'ny fitadiavana sanda na anarana lakile manokana.
DConf-tonian-dahatsoratra: Nampiasaina tamin'ny interface Unity. Tokony apetrakao ilay fonosana dconf-fitaovana, ary tantano ny baiko dconf-tonian-dahatsoratra. Ny fiovana ataontsika dia manan-kery eo noho eo, raha ampiharintsika avy eo amin'ny interface tsara: Unity.
Ohatra amin'ny interface Unity, hanova ny bokotra amin'ny fikandrana programa Ampitomboy / ahenao / hikatona, novaina tamin'ny Dconf-tonian-dahatsoratra: ny fidirana: org »gnome» shell »overrides: button_layout
Amin'ny iray amin'ireo "Mpanonta fandrindrana" ahoana ny fanovana bokotra_layout Mitovy amin'ny fomba nanaovana azy io gconf-tonian-dahatsoratra en GNOME2.
nanova DConf-tonian-dahatsoratra sarotra kokoa noho ny hafa izany "Mpanonta fandrindrana" satria tsy manana fitaovam-pikarohana hanampiana hitady anarana na soatoavina manokana izy io. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy tadidinao fa ny fampiasana ireo "Mpanonta fandrindrana" Tsy ny fomba fanolorana fanitsiana ny safidin'ny birao, saingy mety ilaina izany raha toa ka tsy manome fomba hanovana safidy hafa ny fampiasana fampifanarahana mety ho an'ny rindrambaiko sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Mpanonta fandrindrana (* Tonian-dahatsoratra)
Ny dconf-editor koa dia miasa ho an'ny Pantheon (fanabeazana fototra)
Psst, tena tsara, fa diso ny Xfconf dia toy ny milaza ny Xfce Configuration Editor 😉
Ie, marina izany 😀
Tsara fa misaotra ;)!
DNF: Mpitantana fonosana Fedora 18 vaovao
Mametraka sy manamboatra Plank ao amin'ny Debian Testing + [My birao amin'ity herinandro ity]